ခရီးသွားလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ ရှိထားသင့်သည့် Website ၀န်ဆောင်မှု (၉) ခု - Zeagwat, Inc.
ခရီးသွားလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များ ရှိထားသင့်သည့် Website ၀န်ဆောင်မှု (၉) ခု
သင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် Website ထဲမှာ ဘယ်လို Features တွေကိုထည့်ရမလဲဆိုတာ စဥ်းစားရခက်ခဲနေပါသလား? ဒါမှမဟုတ် Website တော့ရှိပြီးသား ဒါပေမယ့် ခေတ်နောက်ကျနေလို့ တခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ တန်းတူ ခေတ်ရှေ့ပြေးချင်ပါသလား? အခုပြောပြပေးမယ့် ၀န်ဆောင်မှုတွေဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက် ရေပန်းစားနေတဲ့ Website ၀န်ဆောင်မှုများပဲဖြစ်ပါတယ်။ Website အသစ်လုပ်မယ့် လုပ်ငန်းရှင်များရော အဟောင်းပြင်မယ့်လုပ်ငန်းရှင်များပါ အောက်မှာပြထားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများကို မဖြစ်မနေထည့်သွင်းအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
လှပသေသပ်သည့် Desktop and Mobile Web Design
မိမိလုပ်ငန်း၏ Website ကို၀င်ရောက်ကြည့်ရှုသူ Customer အနေဖြင့် Website တက်လာသည်နှင့် ပထမဦးဆုံးစတင်မြင်တွေ့ရမှာက Website ၏အသွင်အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ Website Design ကအရောင်တွေမှားယွင်းစွာသုံးထားမယ် နောက်ပြီးတော့ Mobile Phone, Tablet အစရှိတာတွေကနေကြည့်ရှုလို့ အဆင်ပြေအောင် Mobile Optimized မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်တော့ Customer အနေဖြင့် စိတ်ရှုတ်သွားနိုင်ပြီး မိမိလုပ်ငန်း၏ First Impression ကိုကျဆင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ကြောင့် Website တစ်ခု၏ အသွင်အပြင် Design (Appearance) သည် အရေးကြီးဆုံးနံပါတ် (၁) နေရာတွင် ရပ်တည်နေပါတယ်။
လိုက်နာရန် အချက်များ ကတော့ ရုပ်ထွက်ကောင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့် ဓာတ်ပုံများသုံးခြင်း၊ Latest Web Design Trend များကို တတ်ကျွမ်းသည့် Developer များနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ အရောင် (Color) များကို မှန်ကန်စွာအသုံးချခြင်း၊ မည်သည့် Phone, Tablet နှင့် ကွန်ပျူတာများဖြင့် ကြည့်ရှု၍ အဆင်ပြေအောင် Mobile Optimized လုပ်ခြင်း၊ Font နှင့် Typography များကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
မိမိ Website ကို၀င်ရောက်လာသည့် Visitor (သို့) Customer များကို Live Chat စနစ်ဖြင့် ကြိုဆိုခြင်းဟာ Customer ၏ယုံကြည်မှုနှင့် စိတ်ကျေနပ်မှုကို အများကြီးတိုးတက်စေပါသည်။ ဥပမာ အနေဖြင့် Visitor တစ်ယောက်ဟာ မိမိ Website ကို၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနေပြီဆိုပါက Website ၏မြင်သာသည့် တစ်နေရာတွင် “Hi We are online and If you need help, simply reply to this message” ကဲ့သို့သောစာလေးအားဖော်ပြပေးသော Live Chat System တစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့် Visitor များသည် ဤ Website ဟာ အမြဲအလုပ်လုပ်နေတဲ့ Website တစ်ခုဟုကောက်ချက်ချကာ Customer ၏ယုံကြည်မှုကို ပိုမိုရရှိစေပါသည်။ Live Chat စနစ်ဟာ Website ပေါ်မှာ Customer သိလိုသည့် အကြောင်းအရာများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖြေကြားပေးသည့် နေရာတွင် အရမ်းပဲအသုံး၀င်လှပါသည်။
Tour Programs System with Payment Gateway Integration
Travel Website တစ်ခုကိုပြုလုပ်ပါက မိမိသည် Customize Tour ရောင်းသည်ဖြစ်စေ Day Tour ရောင်းသည်ဖြစ်စေ Website ပေါ်တွင် Tour Programs များကို ဖော်ပြပေးရမည်မှာ မလွဲမသွေပါပဲ။ Tour Programs ထဲမှာဘာတွေဖော်ပြပေးနိုင်သလဲဆိုတော့ Program ၏အကြောင်းအရာ၊ Tour Itinerary များ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ Include/Exclude Service များ၊ စျေးနှုန်းများ၊ Tour Program ၏တည်နေရာပြမြေပုံများ နှင့် Customer Reviews and Ratings များကို ဖော်ပြပေးနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် Website တွင် တင်ထားသော Tour Programs များအား Online မှ Visa/Master Card များဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီးငွေပေးချေသည့် စနစ်တစ်ခုကို ပါထည့်သွင်း ထားရပါမည်။ ငွေပေးချေရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်အသုံးများဆုံး Payment Gateway Service များကတော့ 2c2p နှင့် C B Bank ၏ MIGS Payment Gateway တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
News and Blog ရေးသားခြင်း
Website တစ်ခု၏အသက်ဟာ သတင်းအချက်အလက် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းပါ။ မိမိ၏ Website ကိုတစ်ခါဆွဲထားပြီးရင် အဆင်ပြေနေပြီဆိုတို့ အယူအဆဟာ အရမ်းကြီးမမှန်ကန်ပါဘူး။ Travel လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ခရီးသွားနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းတွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မဖြစ်မနေသွားသင့်သည့် နေရာများ၊ မြန်မာ့ရိုးရာ အကြောင်းများ အစရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ အနည်းဆုံးတစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ရေးသားဖော်ပြခြင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခရီးသွားချင်နေသော Visitors များအား အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ယုံသာမက မိမိ Website ၏အင်တာနက်ပေါ်တွင် လှုပ်ရှားသက်၀င်မှုကိုပါ ပိုမိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ သင့် Website တွင် Blog ဖတ်နေသူတစ်ယောက်ကို Customer တစ်ယောက်ဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ဖို့ဟာ အရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ Content is King လို့ဆိုပါရစေ။ ဒီလိုမျိုး Blog (Content) ရေးသားခြင်းဟာ SEO လို့ခေါ်တဲ့ Search Engine Optimization မှာများစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Events လို့ခေါ်တဲ့ ရာသီအလိုက် မြန်မာ့ရိုးရာပွဲတော်များကို ဖော်ပြပေးထားခြင်းအားဖြင့် Festival နှင့် Cultural Tour Programs များအကြောင်းကို မိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
Search Engine ဆိုတာဘာလဲ? Google, Bing, Yahoo အစရှိသည့် ကုမ္ပဏီကြီးများဟာ အင်တာနက်မှာ ကိုယ်သိချင်တာကို အလွယ်တကူ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းရှာဖွေပေးနိုင်သော ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် (Search Engine) ကြီးများဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ Website မရှိရင် Search Engine ဆိုတာလည်း မပေါ်လာနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင့်မှာ Website ရှိနေပါက သင့် Website ကို Search Engine ပေါ်မှာရှာလို့လွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းဟာ ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲလို့ ရှင်းပြဖို့ သိပ်မလိုလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
Search Engine မှာ ရှာဖွေလို့ရနိုင်ဖို့ဆိုရင် အဓိကအကြောင်းအရာ နှစ်ခုလိုပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကတော့ Content နှင့် Keywords တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Content ဆိုတာကတော့ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ စာသားများ၊ သီချင်းများ၊ စာအုပ်များအစရှိသည်တို့ဖြစ်ပြီး Keyword ဆိုတာကတော့ ထို Content များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စကားစုများပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ – Bagan အကြောင်း Blog ရေးပြီဆိုလျင် Bagan နှင့်ပတ်သက်သည့် Search Engine ပေါ်တွင် ရှာဖွေသူများအသုံးပြုနိုင်သည့် Keywords အချို့ကတော့ Bagan, Bagan Myanmar, Myanmar Temple City, Myanmar Ancient City Bagan, Myanmar Temple, Myanmar Pagoda အစရှိသည်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Bagan အကြောင်းရေးသားမည်ဆိုပါက Bagan နှင့် ပတ်သက်သည့် Keywords များနှင့် Content ကိုချိတ်ဆက်မထားလျင် သင့် Website ဟာ Search Engine ပေါ်မှာရှာဖွေလို့မလွယ်ကူနိုင်တော့ပါဘူး။
Search Engine Optimization လုပ်ရာတွင် မိမိကိုယ်တိုင်လုပ်လို့ရသလို ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်များကို ပြုလုပ်ခိုင်းလို့လဲရပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်မည်ဆိုပါက Search Engine အကြောင်းကို သေချာစွာနားလည်ဖို့လိုအပ်ပြီး Google Trend, Keyword Research, Sitemap Generation, Link Structure, Title Structure and Metadata အစရှိတာတွေနဲ့ အကျမ်းတ၀င်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်ဟာ အိမ်ရှင်တစ်ယောက်ဆိုပါတော့။ သင့်အိမ်ကို လာလည်သွားတဲ့ ဧည့်သည်ဘယ်သူ၊ ဘယ်ကလာတဲ့၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာနေသွားတယ်၊ အိမ်မှာဘာတွေလုပ်သွားတယ်၊ ဘယ်နေရာတွေကို လိုက်ကြည့်သွားတယ် အစရှိတာတွေကို သင်အနေနဲ့ သိတာပေါ။ အဲ့ဒီလိုဆိုရင် သင့် Website ကိုရော လာလည်တဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းကို သင်သိပါသလား? သင်မသိဘူးဆိုရင် သင့် Website မှာ Analytics System တစ်ခု မရှိသေးလို့ပါပဲ။ Analytics ဆိုတာကတော့ သင့် Website မှာ လူဘယ်နှစ်ယောက်လာလည်တယ်၊ ဘယ်နေရာ (Page) တွေကိုကြည့်သွားတယ်၊ ဘယ်ကလာတယ်၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အချိန်ဖြုန်းသွားတယ် အစရှိတာတွေကို ဖော်ပြပေးတဲ့ စနစ်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီလိုမျိုး Analytics စနစ်တစ်ခုကို သင့် Website မှာတည်ဆောက်မထားဘူးဆိုရင်တော့ သင်ဟာ အိမ်မှာ ဘာြဖစ်လို့ဖြစ်နေမှန်း မသိတဲ့ အိမ်ရှင်တစ်ယောက်နဲ့ တူသွားပါလိမ့်မယ်။ Analytics အနေနဲ့ အသုံးများဆုံးစနစ်က တော့ Google Analytics စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Email Service လို့ဆိုသည့်နေရာတွင် Gmail ဒါမှမဟုတ် Hotmail, Outlook အစရှိတဲ့အရာအတွေအသုံးပြုလဲရတာပဲလို့ သင်တွေးကောင်းတွေးမိပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာ အဲ့လိုတွေးထားတယ်ဆိုရင် အခုပြောပြမယ့် အချက်လေးတွေကို ဖတ်ပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပါ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo အစရှိတာတွေဟာ မည်သူမဆို Account တစ်ခုကို အလွယ်တကူဖွင့်လို့ရပြီး သင့်လုပ်ငန်းနာမည်နဲ့ အတုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ဒုတိယတစ်ချက်က တော့ ယုံကြည်မှုပါ။ နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် ဆက်သွယ်ပြီဆိုပါက ထိုကုမ္ပဏီဟာ ဘယ်လောက်အထိခိုင်မာလဲဆိုတာကို Email နှင့်တော်တော်များများက ဆုံးဖြတ်လေးရှိပါသည်။ သင့်ကုမ္ပဏီနာမည် နှင့် ပို့လာတဲ့ Gmail ဆိုရင်တော့ သေချာပေါက် သင်ဟာ နိုင်ငံခြားသားများနဲ့ ယုံကြည်မှုပြဿနာတက်နိုင်ပါပြီ။ နိုင်ငံခြားသားအများစုအနေနဲ့ သင့် Domain လိပ်စာကလာတဲ့ Email မျိုးကို ပိုမိုယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဥပမာ – sales@zeagwat.com , info@zeagwat.com.
နောက်တစ်ချက်ကတော့ Brand Impression ပါ။ သင်ဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေ (သို့) သင့် Clients တွေကို မိမိရဲ့ Domain Email နဲ့မပို့ဘဲ Gmail ကဲ့သို့သော Email များဖြင့် ဆက်သွယ်ပေးပို့ပါက သင့်လုပ်ငန်း၏ Impression ကိုကျဆင်းစေတဲ့အပြင် တချို့ဆိုရင် Spam Mail အဖြစ်သတ်မှတ်ချင်းခံရပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ လုံခြုံရေးမြင့်မားပြီး စိတ်ချရတဲ့ Email Service ကလည်း သင့်လုပ်ငန်းအတွက် မဖြစ်မနေအထူးပင်လိုအပ်ပါသည်။
ဘယ်သူမှ စောင့်ရတာကို မကြိုက်ပါဘူး။ သင်ရောကြိုက်ပါသလား? စိတ်၀င်စားလို့ ၀င်ကြည့်တဲ့ Website ကစောင့်ရပြီး ကြာနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့် Customer ဟာပြန်သွားမှာပါ။ ပြန်သွားရင် သင့်ရဲ့ ၀င်ငွေထိခိုက်မယ်။ သင့်၀င်ငွေထိခိုက်ရင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်နှုန်းကျဆင်းမယ်။ ဒီလိုမျိုးအကျိုးဆက်တွေကို ရှောင်ရှားဖို့အတွက် သင့် Website ကို Speed and Performance Optimization ပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ သင့် Website ကအလုပ်လုပ်ဆောင်တာ မြန်တယ်ဆိုရင် Customer တွေစိတ်ချမ်းသာမယ်.. စိတ်ချမ်းသာရင် သင့်လုပ်ငန်း အပေါ်ကို ယုံကြည်မှုတိုးတက်ကာ သင်လည်း ၀င်ငွေးတိုးတက်နိုင်ပါတယ်။
Contact and Tour Customization Form
Contact form နဲ့ Tour Customization Form ဟာလည်း အရေးကြီးတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုထဲမှာပါ၀င်နေပါတယ်။ Form တွေဟာ Mobile ရော Desktop မှာပါ အဆင်ပြေစွာ အသုံးပြုနိုင်ရပါမယ်။ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်ကို သေချာစွာ စစ်ဆေး ကောက်ယူနိုင်ရပါမယ်။ Design အသွင်အပြင်အနေနဲ့လည်း သေသပ်လှပရပါမယ်။ ဒါမှသာ Form ကိုဖြည့်တဲ့ Customer အနေနဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ ဇီးကွက်အနေနဲ့ လိုအပ်သည့် ၀န်ဆောင်မှုများကို အစဥ်အမြဲ တိုးချဲ့လျက်ရှိရာ မကြာမီတွင် Chat Bot အစားထိုးအသုံးပြုသည့် Tour Customization System ကို စတင်မိတ်ဆက်တော့မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် Pre Order စုံစမ်းလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် – 09770126660 | အီးမေးလ် – sales@zeagwat.com သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။